YEYINTNGE(CANADA): Friday, April 30
There isalanguage misunderstanding between "denied and being denied". Ko Mya Aye urgently need medical treatment to live, he never denied the medical treatment. Most of all, the regime has no sympathy to offer medical treatment to any political prisoners such as Ko Mya Aye.
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ငြင်းဆန်
နှလုံးရောဂါ ရှိနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးက အာဏာပိုင်တွေ ကမ်းလှမ်းတဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ငြင်းဆန်လိုက်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်အချို့၏ ယခင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (ဝဲမှယာ) ကိုဂျင်မီ ခေါ် ကိုကျော်မင်းယု၊ အမည်မသိ၊ ကိုမြအေးနှင့် ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်။ (Photo: AFP)
ဘာ့ကြောင့် ငြင်းဆိုလိုက်သလဲဆိုတာကို အတိအကျ မသိရသေးပေမဲ့ အခုလိုဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ကိုမြအေးဖက်က ငြင်းဆန်လိုက်တာဟာ သူ့ကို ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော် အကျဉ်းထောင်ကနေ မိသားစုနဲ့ ပိုမိုဝေးလံတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့
ဆက်နွှယ်နိုင်ကြောင်း ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် AAPPခေါ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က ပြောပါတယ် ။
'အဓိကကတော့ သူ့ နှလုံးရောဂါရှိတယ်။ သူ အခြေအနေဆိုးလာတယ်။ သူက ရန်ကုန်မှာ အဲလို ရောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လောက် ဆိုးလာတယ်ဆိုတာတောင် က္ဆွန်တော်တို့က အတိအကျတော့ ပြောလို့ မရဘူး။ အခုလိုမျိုး အာဏာပိုင်တွေဆီကနေတဆင့် တောင်းခံတဲ့အခါကျတော့ သူတို့က ထောင်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ တောင်းတဲ့အခါမှာ မိသားစုနဲ့ နီးတဲ့ အင်းစိန်ထောင်မျိုး ပြောင်းတာ မဟုတ်ပဲနဲ့ ဒီ တောင်ကြီးထောင်ကို သူတို့က ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ မိသားစုနဲ့ ပိုလို့တောင် ဝေးသွားတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ကိုမြအေးအနေနဲ့ ငြင်းဆန်တာမျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။'
ကိုမြအေးခံစားနေရတဲ့ နှလုံးရောဂါကို သေသေချာချာ ကုသခွင့်တောင်းထားတဲ့ အတောအတွင်းမှာပဲ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့မှာ လွိုင်ကော်ထောင်ကနေ တောင်ကြီးထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။http://www.rfa.org/burmese
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/30/20100အကြံပြုခြင်း
30 April 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/qk3926h30 April 2010 Yeyintnge's Diary
ညီလာခံကျင်းပရေး အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
နိုင်ငံတကာရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ၊ ရဲဘော်များ ။
ရက်စွဲ ။ ။ ဧပြီလ(၂၉)ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့ ၊၂၀၁၀
အကြောင်းအရာ ။ ။ ညီလာခံကျင်းပရေး အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်း (Buffalo)မြို့တွင် မေလ(၂၂/၂၃)ရက်နှေ့၌ “စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများညီလာခံ” ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရန် တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပြုပေးပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည် ။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ။ ။ မေလ ( ၁ )ရက် ၊ စနေနေ့ ၊၂၀၁၀
ကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ ည (၉) နာရီ ( နယူးယောက်ပြည်နယ် စံတော်ချိန် )
တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ။ ။ (71 2) –45 16100
Pin- နံပါတ် ။ ။5042 80#
- ကိုကိုလေး (415)-203 0541 / kokophoto@yahoo.com
- ကိုထွန်းအောင်ကျော် (607)-339 6054 / hagyaw@gmail.com
- ကိုရဲထွဋ် (347)-226 0572 / yehtut@yahoo.com
- ကိုခွန်ထွန်းတောက် (301)-706 1591 / hkuntheinhtoon@gmail.com
- ကိုမင်းနိုင် ( 716)-715 3329 / bago8888@gmail.com
- Dr- ခင်စိန် (919)-730 7956 / drk_sein@yahoo.com
- ကိုစိုင်း (510)-415 2289 / sai18218@yahoo.com
- ကိုစိုးမိုး (518)-522 8253 / soemoe62@yahoo.com
- ကိုဇော်ကိုနိုင် (518)-772 5038 / zaw_kk@yahoo.com
နိုင်ငံရေး ပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့ စာရင်းများ
စဉ် ပါတီအမည် လျှောက်ထားသည့်
ပုဂ္ဂိုလ် ပါဝင်ဦးရေ မှတ်ချက်
၁ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား လူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) (၂၂-၃-၂ဝ၁ဝ) ဦးရဲထွန်း (၂၇)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၂ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ချုပ် (၂၂-၃-၂ဝ၁ဝ) ဦးအေးလွင် (၂၈)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၃ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) (၃ဝ-၃-၂ဝ၁ဝ) ဦးသုဝေ
၄ ကရင် ပြည်သူ့ ပါတီ (၃၁-၃-၂ဝ၁ဝ) ဦးထွန်းအောင်မြင့် (၁၆)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၅ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ် (၁-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးတင်ထွန်းမောင် (၁၅)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၆ ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (PNO) (၂-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးစံလွင်
၇ ကချင် ပြည်နယ် တိုးတက်ရေး ပါတီ (၅-၄-၂ဝ၁ဝ) ဒေါက်တာမနမ်တူးဂျာ (၁၅)ဦး စိစစ်ဆဲ
၈ မြန်မာ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (၅-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးဇင်အောင် (၁၇)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၉ မတူ ကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီ (၆-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးနေမျိုးဝေ
၁၀ ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ပါတီ
(၆-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးထွန်းအောင်ကျော် (၃၄)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၁၁ ချင်းအမျိုးသားပါတီ (၇-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးဇမ်ကျင်ပေါ်(ခ)ဦးဇိုဇမ်း (၁၆)ဦး စိစစ်ဆဲ
၁၂ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ (၈-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးရွှေအုံး
၁၃ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၈-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း (၁၅)ဦး စိစစ်ဆဲ
၁၄ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ
(၈-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးအိုက်မုန်း (၁၅)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၁၅ ဝံသာနုNLD (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) (၉-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးရဲမင်း
၁၆ ''ဝ''ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၉-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဦးထွန်းလူ (၁၅)ဦး ခွင့်ပြုချက်ရပြီး
၁၇ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၂၃-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးစောခင်မောင်မြင့် (၁၅)ဦး စိစစ်ဆဲ
၁၈ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တိုးတက်ရေး ပါတီ (၂၃-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးချန်းခေါ
၁၉ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (၂၃-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးပေါ်လျှံလွင် (၂၂)ဦး စိစစ်ဆဲ
၂၀ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ (၂၆-၃-၂ဝ၁ဝ) ဦးခူးယူဂျင်း (၁၇)ဦး စိစစ်ဆဲ
၂၁ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (၂၆-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးလှသိန်း
၂၂ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု (၂၈-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးအေးကြိုင် (၁၅)ဦး စိစစ်ဆဲ
၂၃ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (၂၉-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးသိန်းစိန် (၂၇)ဦး စိစစ်ဆဲ
၂၄ ''ဝ'' အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ (၂၉-၄-၂ဝ၁ဝ) ဦးစောဖီးလစ်
၂၅ အင်း အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
မှတ်ချက်။ ။ လျှောက်ထားပါတီ (၂၅) ပါတီ ၊ ခွင့်ပြုပါတီ (၁၂) ပါတီ ၊ စိစစ်ဆဲပါတီ (၁၃) ပါတီ။
ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း ကော်မရှင်တွင် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင် ရမည့် တည်ဆဲ ပါတီ ၁ဝ ခုစာရင်း
၁ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (National League for Democracy-NLD) မှတ်ပုံမတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး
၂ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ (National Unity Party- NUP) မှတ်ပုံပြန်တင်
၃ ရှမ်း တိုင်းရင်း သားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (Shan National League for Democracy- SNLD) -
၄ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ့် အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ် (Union Paoh National Organization -UPNO) -
၅ ရှမ်းပြည် - ကိုးကန့် ဒီမို ကရက်တစ် ပါတီ (Shan State Kokang Democratic Party-SSKDP) -
၆ မြို(ခေါ်) ခမီ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ (မ၊ ခ၊ မ၊ ည၊ ဖ) (Mro or Khami National Solidarity Organization -MKNSO) မှတ်ပုံပြန်တင်
၇ လားဟူ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ပါတီ (Lahu National Development Party- LNDP) မှတ်ပုံပြန်တင်
၈ ပြည်ထောင်စု ကရင် အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ် (Union Karen League) မှတ်ပုံပြန်တင်
၉ ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီ နှင့် ညီညွတ်ရေး ပါတီ (Kokang Democracy and Unity Party) -
၁၀ 'ဝ' အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးပါတီ (Wa National Development Party) -
၃၀ . ၄ . ၂၀၁၀
လူထုတိုက်ပွဲ ကော်မတီ ၂၀၁၀ (ပို့စကဒ်)
The Voice Weekly ဂျာနယ် Vol.6/No.25
FTUB မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် ၏ ၁၂၀ ကြိမ်မြောက် မေဒေးနေ့ ကြေညာချက်
Burma issue at G8 summit in Canada
In July 2009, the G8 Meeting Canada is hosting was cited as “...a tremendous opportunity to champion freedom of democracy, human rights and the rule of law.”
You are aware that the Burmese military junta’s call for elections in fall, 2010 isacomplete sham given that the National League for Democracy has been sidelined from the process.
In October 2009, 82 Canadian MP's and Senators signedapetition asking the government to supportaCommission of Inquiry into War Crimes and Crimes Against Humanity in Burma.
From the outset you have positioned Canada at the forefront of condemning, in the strongest possible terms, the ongoing injustice in Burma. We have found comfort and solace in both your words and actions. Your understanding of the seriousness of the issues in Burma and the importance of demonstrating Canada's ongoing support was clearly and uniquely demonstrated by your granting of Honorary Canadian Citizenship to Aung San Suu Kyi. We are grateful for your leadership and support.
While we appreciate that there are many issues vying for attention on the world stage in the upcoming G8 meetings, we desperately need Burma to be part of the discussions. We implore you to consider placing the “Continuing Crisis of Democracy and Human Rights in Burma” on the agenda and ask your support
for the following statements of principle:
• The Burmese military junta (SPDC) hold all inclusive, transparent and free elections in 2010, with international monitors present
• Denunciation of the election results should they not meet international standards of fairness
Your consideration and anticipated support for the above is much appreciated.
Canadian Campaign for Free Burma is lunching the letter campaign to appeal the Prime Minister of Canada forafurther and more meaningful reflection of Canada’s commitment to human rights and democratic reforms in Burma in upcoming the G8 summit in June 25-27 this year.
Given the unique nature of this forum, we believe that this isagreat opportunity for Canada to forcefully advance the issue of Burma. And the G8 Summit presentsaperfect opportunity to bypassaveto by China on efforts to move forward the Burma agenda.
G8 is the most influential international forum outside of the formal institutional framework of the United Nations. Prime Minister of Canada, asahost of this important forum, and the President of the G8, has tremendous leverage in setting the agendas.
Burma’s military junta has now set the stage for its 2010 elections with the announcement of new electoral laws which now effectively disenfranchised the majority of pre-existing political parties, including the main National League for Democracy (NLD) and the ethnic parties.
We need to ask that Canada, as Chair of the Summit, uses the G8 forum to convince its international partners to forgeastrong and cohesive international policy on Burma.
Please find the attached files (one with banner, one without banner) for you to print and send the signed letter to Prime Minister Harper at Fax: 613 941 6900, or mail. You can simply copy (from 2nd file word document) / paste and email to: pm@pm.gc.ca
Kindly ask your family members and friends to do the same.
I'd like to mention the quote from one Toronto area MP:
"Start the mail campaign every Burmese every friend of the Burmese every association every members of the family email fax letter. The more the merrier.2letters means we might have an issue.3letters let's take notice. 1000 letters "huston we haveaproblem"
ရိုဟင်ဂျာရေးရာ လူမှူစီးပွားသတင်းဂျာနယ် Volume 1 of Issue 5
Rohingya Journal Volume 1 of Issue 5.
NLD အဖွဲ့ ချုပ်မှထုတ်ပြန်သောမေဒေးနေ့ ကြေညာချက်
Mayday Statement NLD
ညီလာခံကျင်းပရေး အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြား...
နိုင်ငံရေး ပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့...
FTUB မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် ၏ ၁...
ရိုဟင်ဂျာရေးရာ လူမှူစီးပွားသတင်းဂျာနယ် Volume 1 of...